Ahoana ny fomba hiatrehana ny fahadisoam-panantenana ary hiroso amin'ny fiainana - An-Tsaina
Ahoana ny fomba hiatrehana ny fahadisoam-panantenana ary hiroso amin'ny fiainana
Isika rehetra dia sendra fahakiviana amin'ny fiainantsika amin'ny fomba hafa na amin'ny fiatrehana ny faran'ny fifandraisana, tetikasa asa izay tsy nandeha namolavola, na fahatsapana nenina amin'ny fiainantsika manokana.
Ny fianarana ny fomba hifehezana ny fahadisoam-panantenana sy handresy ireo fahatsapana entin'izany dia zava-dehibe tokoa amin'ny fanampiana antsika hanana fiainana tsara sy feno.
Hihazakazaka amin'ny toro-hevitra avo indrindra izahay rehefa hiatrika fahakiviana sy handroso.
Ny sasany amin'ireto toro-hevitra ireto dia tena ilaina amin'ny fiatrehana ny fahadisoam-panantenana lehibe, fa ny sasany kosa mety indrindra hihoarana ny fahadisoam-panantenana kely, ary ny sasany kosa dia mandaitra amin'ny toe-javatra roa.
Na dia mety ho tiantsika aza ny hevitra hitsambikina amin'ny fomba fiaina vaovao mahitsy aorian'ny zavatra mahadiso fanantenana antsika, zava-dehibe ny mahatadidy fa ny alahelo dia ampahany manandanja amin'ny hetsika fanodinana.
Tsy mila misy ny fahafatesantsika malahelo, mety ho fatiantoka fotsiny izany Misy zavatra .
Very ny asanao, mandalo fisarahana , na ny fiarahana amina namana dia mety handratra avokoa.
Mbola miaina fatiantoka karazana ianao, ary koa fiovana lehibe eo amin'ny fiainanao, ary mila fotoana ianao hamoahana azy alohan'ny ahafahanao manomboka amin'ny mandroso.
Aza maika ny hahatsapa ho tsara kokoa raha vantany vao misy zavatra ratsy manjo, dia makà fotoana hikarakarana azy ary ampitao amin'ny tenanao manontolo izany.
Ny famoizam-po dia azo esorina, toy ny fihenan'ny fifandraisana mandritra ny herinandro vitsivitsy, na mety ho tampoka sy manaitra.
Na izany na tsy izany dia mila manome fotoana kely ianao hahalalana ny zava-mitranga na efa nitranga.
Avelao ianao hahatsapa zavatra ratsy ary hitady fomba hametahana azy - 'Androany dia sosotra aho fa…,' 'Ankehitriny dia tezitra aho…,' ' Mahatsiaro saro-piaro aho an'ny… ”
Fihetsika voajanahary sy mahasalama tanteraka io.
Amin'ny alàlan'ny fanoratana anarana ny fihetseham-pontsika dia afaka manomboka miadana tsikelikely azy ireo isika ary mampanalavitra antsika aminy. Izany dia manampy antsika hiroso amin'ny dingana manaraka handresena ny fahadisoam-panantenana.
Voalaza fa, tsy mahasoa ny milelalela lava loatra ary miompana amin'ny fahatsapana sy eritreritra ratsy.
Omeo fotoana kely ianao handinihana ireo onjam-pihetseham-po voalohany (fahatezerana, fahasosorana, alahelo sns.) Alohan'ny handehananao.
Ity dia hametraka anao ao amin'ny sehatr'asa tsara lavitra kokoa noho ny fametrahana ireo rafitra fikirakirana maharitra kokoa!
Eritrereto ny inona tena mitohy.
Rehefa ao anatin'ny fotoana ianao, ny zavatra kely kokoa dia mety hahatsapa ho toy ny fifanarahana lehibe.
Miezaha mihemotra ary mitadidy zava-misy amin'ny tenanao. Izany no antony ahazoana mandray ireo fahatsapana mahery vaika ireo amin'ny voalohany dia hevitra lehibe tokoa.
Amin'ny fotoana nahazoanao ireo fotoam-pitomaniana lehibe sy fisafoahana tsy ho eny an-dàlana ireo dia afaka manomboka mijery zavatra mitombina kokoa ianao.
Manaova fanamarihana ny tena zava-nitranga - zava-misy, teny nalaina, na inona na inona izay hanampy anao hahatadidy ny tena zava-nitranga.
Avereno jerena ity miaraka amin'ny loha mazava kokoa ary atombohy ny fanodinana azy indray.
Raha tsy misy ny fahatsapana miraikitra dia tena ratsy tokoa ve ny zava-nitranga?
Mety mbola tezitra ianao, ary manana fomba maro handresena ireo fahatsapana ireo izahay.
Mety ho tsapanao fa tsy mila manohy mihetsika amin'ny fihetsem-po mahery toy izany intsony ianao.
Ampahatsiahivo ny tenanao fa na dia mety ho voajanahary aza ny fitondran-tenanao, dia tsy dia mahasalama loatra ny mandentika tena maharitra ela ao aminy.
Ny firesahana ny zavatra tsapanao no iray amin'ireo fomba tsara indrindra hiatrehana ny ankamaroan'ny zavatra amin'ny fiainana, ary ny fiatrehana ny fahadisoam-panantenana dia tsy misy hafa amin'izany.
Hamarino tsara fa matoky an'izay miresaka aminao ianao - soso-kevitra izahay hisorohana ny tsy fifampiresahana amin'ireo mpiara-miasa aminao momba ny fahatsapanao lalina kokoa raha tsy hoe fantatrao tsara izy ireo, indrindra raha misy lafiny asa izany.
Raha sahirana ianao amin'ny famoahana ny famotsoran-keloka amin'ny zavatra efa niasanao mafy, dia mety ho tena mora ny mandroba sy manome tsiny olona hafa .
Raha tokony hanao an'io dia miresaka amin'ny hafa momba ny fahatsapanao fa io dia tena hanampy anao amin'ny fikarakarana azy.
Ny mandalo fisarahana na fanandramana ny fihenan'ny fisakaizana dia mety hahasosotra tokoa. Ny fahadisoam-panantenana avy aminy dia mety ho tena manta, ka izay no antony manampy anao hiresaka izany.
Ampiharo ny fankasitrahana sy ny fahatsiarovan-tena
Diniho ny fisaintsainana - izany dia afaka manampy amin'ny fampitoniana ny sainao rehefa ketraka ianao.
Mety hahakivy mampihetsi-po be dia be , ao anatin'izany ny adin-tsaina, noho izany dia zava-dehibe koa ny fiatrehana ireo fahatsapana faharoa ireo.
Makà fotoana kely hampiharana ny fahatsiarovan-tena. Izy io dia afaka manisy fiovana lehibe amin'ny fomba fikirakiranao toe-javatra mamela anao hahatsiaro ho kivy na ho kivy.
Manampy anao amin'ity indray mitoraka ity mikotrika ary manatreha, miato kely hisaintsainana ny momba anao Aza mbola manana amin'ny fiainanao, na dia mahasosotra anao aza ny tsy fisian'ny zavatra na olon-kafa.
fampisehoana mangatsiaka steve austin vato
Ny fankasitrahana dia zavatra iray izay hafoin'ny ankamaroantsika maro - fantatsika fa tsara vintana isika satria mitafo tampon-doha sy sakafo hohanina.
Fa ahoana ny amin'ny zavatra hafa rehetra?
Ampiofano ny sainao handeha lalina kokoa ary hijery ireo zavatra lehibe hafa amin'ny fiainanao, toy ny olon-tianao ary misy talenta anananao , ary koa ny zavatra toy ny fahasalamanao, faharanitan-tsaina ary fangoraham-po.
Amin'ny alàlan'ny fiomanana mankasitraka sy mahatsapa tena, dia hahatsapa ho mahazo aina kokoa ianao, milamina ary matoky tena amin'ny fiainanao sy ny safidinao.
Midika izany fa raha misy zavatra tsy mandeha amin'ny drafitra indray amin'ny ho avy, dia efa fantatrao fa ao anaty toe-javatra mahafinaritra ianao ary tsy hahatsapa ho very saina be.
Satria ny lafiny iray amin'ny fiainanao dia tsy dia araka ny nitiavanao azy, dia tsy midika izany fa mbola tsy afaka mifantoka amin'ny hatsaran'ny zavatra hafa rehetra ianao.
Amin'ny fametrahana izao tenanao izao dia azo inoana fa hiatrika ny fahadisoam-panantenana ho avy ianao haingana sy ara-pahasalamana, manampy anao handroso amin'ny fomba tsara.
Ahoana no hiatrehana ny fahadisoam-panantenana amin'ny fifandraisana
Ahoana ny fomba handresena ny fahalavorariana: fomba 8 hanaiky kely noho ny tsara indrindra
Ahoana ny fijanonana amin'ny fahatsapana tsy fahombiazana
Ny lafiny sasany amin'ity lisitra ity dia tena mifantoka amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy fahatsiarovan-tena. Izahay dia manome sosokevitra ireo mekanisma hiatrehana ny rehetra, mazava ho azy, saingy fantatray fa tsy mitovy ny fomba fandraisan'ny olona ny zavatra.
Raha mbola tsy nahita na inona na inona avy amin'ity lisitra ity izay tena resona aminao ianao dia angamba mihetsika amin'ny fomba hafa kely fotsiny ny sainao.
Ny fahazotoana dia endrika fahatsiarovan-tena lehibe indrindra, indrindra ho an'ireo izay mirona hiala amin'ny zavatra hitany ho fanafody ‘hippie’ ary mankahala ny eritreritra ny misaintsaina ao amin'ny efitrano fanaovan-jiro!
Ny fitazonana ny vatanao ho tsara endrika dia fanalahidy ho an'ny karazan-pahasalamana rehetra, fa ny mihetsika sy ny fiaraha-miasa amin'ny vatanao dia tena tsara tokoa rehefa miresaka momba ny traumasy mampihetsi-po.
Hihatsara be ny fahasalamanao ara-tsaina rehefa manomboka mampiditra fanatanjahan-tena amin'ny fiainanao isan'andro ianao.
Ny fanampiana fanatanjahan-tena amin'ny fomba fiainanao dia mahasoa tokoa rehefa miatrika fahakiviana. Mahita ny tanjanao manokana ianao, izay azo hadinoina mora foana rehefa very asa na manapaka fifandraisana.
Mamoy ny tenantsika mandritra ny androm-piainantsika isika - asa, fifandraisana, fisakaizana - ny maro amin'izy ireo dia mety ho poizina mahatsiravina.
Amin'ny fampiharana, mifandray amin'ny vatantsika indray isika ary mahatadidy fa mahay isika.
Mety tsy mpitraka angovo isika (mbola!) Fa isika kosa afaka manao zavatra.
Mety tsy sprinter isika, fa ny vatantsika kosa afaka mihetsika sy mitondra antsika.
Mety tsy gymnast isika, fa afaka miditra amin'ny vatantsika amin'ny alàlan'ny yoga sy Pilates.
Arakaraka ny ahitantsika ny tanjontsika ara-batana no mahatsara ny fahasalamantsika ara-tsaina ary ao anatin'izany ny fahaizantsika mandamina tsara kokoa ny fahadisoam-panantenana, alahelo ary alahelo.
Ankoatr'izay, ny fanatanjahan-tena dia manome antsika tosika ny hormonina voajanahary voajanahary-mahatsapa dopamine sy serotonin. Ity hira ity dia manampy amin'ny fanalefahana ny famoizam-po eo noho eo noho ny fahadisoam-panantenana.
Manaova fanovana ara-batana
Averina indray, afaka miresaka izay rehetra tadiavintsika momba ny fahatsiarovan-tena amin'ny heviny ‘ara-panahy’ isika, fa ny olona sasany kosa mila zavatra ara-batana bebe kokoa mba hahatsapana fa miova tokoa ny zavatra.
Raha mila zavatra mafy orina kokoa ianao dia manaova fanovana ara-batana. Amin'ny fanaovana zavatra azonao atao JEREO NY mitranga, dia manomboka mahatsapa fanaraha-maso indray ianao.
Raha tsy mety aminao ny fisaintsainana dia ovao ny zavatra iray izay afaka ahitanao zavatra mihetsika.
Alamino indray ny toeram-ponenanao, manety volom-bolo, manindroka vaovao, na mividy kiraro vaovao.
Ireo dia mety tsy dia toa fomba fiasa lehibe hiatrehana azy amin'ny voalohany, fa misy siansa ihany ao ambadik'izany rehetra izany!
Amin'ny fanovana zavatra azonao zohina ara-batana sy ho hitanao dia ampahatsiahivina anao fa manana fifehezana vitsivitsy ianao amin'ny zavatra sasany.
Amin'ny fampatsiahivana ny tenanao amin'ity hery anananao ity dia hanomboka hanova ny fomba fisainanao ianao.
Raiso ny fifehezana
Tadidio fa, na eo aza ny fahatsapana ny toe-javatra, dia voafehinao ny fihetsikao. Mety ho elaela ianao vao tonga any, fa afaka misafidy ny fomba fifampiraharahana isan'andro.
Fantatray fa tsy mitombina amintsika ny milaza fa manomboka isan'andro ianao mahatsapa tena tsara sy vonona ny hiroso, noho izany dia ataovy marina amin'ny tenanao ary omeo voninahitra izay tsapanao amin'izao fotoana izao.
'Moment' no teny manan-danja ao - tsy maninona ny fahatsapana ho ambany rehefa ampahatsiahivina anao ny zavatra manafintohina anao, fa aza manova ny alahelo dimy minitra ho andro iray faharavana tanteraka!
Ampahatsiahivo fa manana fahefana hanova ny fomba fisainanao ianao. Arakaraka ny hakelezan'ny fotoana omenao ny tenanao hahatsapa ho kivy isan'andro, ny fotoana kely aorian'ny fizotry ny fanasitranana amin'ny ankapobeny.
Mitadiava fomba hanelingelenana ny tenanao, na mandany fotoana amin'ny namana, mijery sarimihetsika taloha, na mikapoka gym.
Manandrama fomba isan-karazany amin'ny fanomezana hery ny tenanao ary hanomboka handresy haingana ireo zava-tsarotra atrehanao ianao.
Mampihatra fikarakarana tena
Mahereza nefa malemy fanahy! Toy ny lazainay, tsarovy fa voafehinao ny fifehezana ny fihetsem-ponao, fa tsara fanahy amin'ny tenanao , koa.
Ny fampivoarana ny sainao sy ny vatanao amin'ny alàlan'ny fiainana ny zava-nitranga rehetra nahatonga anao hahatsapa ho ratsy dia hanaratsy kokoa ny raharaha.
Arakaraka ny ahararianao ny zava-misy no vao mainka hiharatsy io toe-javatra io, ary arakaraka ny ahatongavanao no hahafoizanao azy.
Miezaha hihazona ny haavon'ny adin-tsainao araka izay tratra. Na dia tsara aza ny manelingelina ny tenanao sy mijanona ho be atao, dia aza atao be loatra.
Eo anelanelan'ny fanaovana yoga sy fidirana amin'ny kilasy fiarahamonina vaovao, makà fotoana kely hialana sasatra fotsiny.
Manàna fandroana bebe kokoa, vakio alohan'ny hatory, hikarakarana ny dite raokandro sy mofomamy maraina!
Mendrika ny hahatsapa ho tsara amin'ny tenanao ianao, ary ity dingana iray ity dia hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahatokisanao tena.
Amin'ny fanomezana valisoa ny tenanao amin'ny fomba kely isan'andro, na amin'ny alina filma na mividy voninkazo vitsivitsy ho anao, dia tena hanomboka hitady tena ianao ary haneho fitiavana.
Tsy izany ihany no hahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa dieny izao, fa hanampy anao hiatrika zavatra amin'ny ho avy koa izany satria hampitombo ny fahatokisanao tena sy hianaranao ahoana ny fitiavanao ny tenanao indray .
Mitadiava fanampiana matihanina
Mazava ho azy, amin'ny fotoana sasany, hevitra mangataka fanampiana matihanina.
Afaka manolotra torohevitra marobe isika, fa ho an'ny olona sasany, mila fanampiana fanampiny.
Raha mahatsiaro mavesatra ny raharaha na sahirana ianao handroso lava aorian'ny zavatra nitranga, dia mendrika ny fitsidihana ny dokoteranao.
Izy ireo dia afaka manoro hevitra anao amin'ny fomba tsara indrindra hiatrehana sy handresena izay rehetra mitranga amin'ny fiainanao.
Mety mila fanampiana ianao amin'ny fanitsiana ny haavon'ny hormonina, ohatra, satria tena misy ny tsy fandanjana Ario ny fihetsem-ponao hiala amin'ny famelezana .
Mety manondro anao amin'ny torohevitra izy ireo na manome sosokevitra hanampiana anao hiala sasatra sy hiala sasatra, anisan'izany ny fomba hanatsarana ny haavon'ny torimasoo , izay tokony tena hanome tosika anao handroso.
Ny fitadiavana paikady izay mety aminao dia lakilen'ity fizotrany ity, voajanahary.
Mety ho elaela vao hahitana mekanisma fandefasana mety aminao, saingy amin'ny alàlan'ny fitsapana sy fahadisoana ihany no ahatongavanao any.
Andramo ny manao zavatra isan-karazany ary soraty izay mahatonga anao hahatsapa ho tsara kokoa sy izay toa tsy mampiova ny toe-tsainao loatra. Avy eo dia tohizo ireo izay miasa ary manafohy ireo izay tsy mandeha.
mpiahy vs afobe ny olombelona ao anaty sela
naninona no najanona i eva marie
fanontaniana mampieritreritra anao momba ny fiainana
maninona aho no sahirana mijery ny mason'ny olona